Waxba ka ma faa’iidin tahriibka sharci darrada ah quus mooyaan e’
Daniel, waa wiil yar oo ka tirsan qaxootiga Eriteriyaanka ah. Sanadkii 2014 ayaa uu ka tagay dalkiisa hooyo si uu u raadsado nolol wanaagsan. Kaddib markii uu muddo ku hakaday xerada qaxootiga ee Adi-Harush, ayaa Daniel waxa uu bilaabay sidii uu u raadin lahaa qaababka uu u dhammaystiri karo riyadiisa tagitaanka Yurub.
Bilowgii 2015, Daniel iyo qaar kale oo ku sugan xerada qaxootigu waxa ay go’aansadeen in ay u badheedhaan socdaalka tahriibka halista badan ee Yurub iyaga oo sii maraya lamadegaanka Saxaara iyo Liibiya. Laakiin socdaalku ma uu noqon sidii ay u qorsheeyeen. Soohdinta u dhaxaysa Sudaan iyo Liibiya ayaa Daniel iyo asxaabtiisa waxa ku qabsaday magafayaal kuwaasi oo ka iibiyay budhcad dambiilayaal ah oo u qaaday Liibiya.
Daniel waxa uu xasuusan yahay dhacdooyinkii murugada iyo argagaxa badnaa ee uu la kulmay intii uu ku jiray gacanta shabakadda dambiilayaasha ee Liibiya. “Qof kasta waxa uu u nuglaa harraad, gaajo, garaacis ama kufsi,” ayaa uu yidhi Daniel.
Daniel intii uu Liibiya joogay waxa loo qabsaday madax-furasho waxaana lagu qasbay in uu waco qoyskiisa si ay uga bixiyaan lacagta madax-furashada ah. “Sida qof kasta oo la qabsado loogu qasbo in uu sameeyo, waxa ay ahayd in aan la hadalo qoyskayga oo Casmara deggan si ay iiga bixiyaan 1,800 oo Doolar oo ah lacagta madaxfurashada ah ee la iga rabo.
Qoyska Daniel ma ay awoodin in ay bixiyaan kharashka badan ee madaxfurashada laakiin aakhirkii qaraabadiisa ayaa lacagtii ka bixisay Daniel na waa la sii daayay. “Markii ay lacagtu gaadhay magafayaasha i haystay, waa la i sii daayay waxaanan go’aansaday in aan dib ugu laabtay Suudaan,” ayaa uu yidhi Daniel.
Sheekada Daniel halkaasi kuma ay dhammaan. Laba bilood kaddib markii la sii daayay ee uu Suudaan dib ugu laabtay, Daniel waxa uu go’aansaday in uu mar kale tijaabiyo. Iskudaygii labaad Daniel waxa lagu qabsaday Liibiya waxaana qaraabadiisa mar labaad qasab ku noqotay in ay bixiyaan lacagta madaxfurashada ah. Kaddib rafaad iyo dulli, ugu dambayntii Daniel waxa uu ku soo laabtay Itoobiya wakhti-xaadirkanna waxa uu ku nool yahay xerada qaxootiga ee Hitsats.
“Waalidkay waxa ay dhinteen aniga oo yar awowyaashay ayaa i soo barbaariyay. Riyadaydu waxa ay ahayd in aan Yurub tago islamarkaana aan naftayda iyo iyaga ba u abuuro nolol wanaagsan. Laakiin tahriibka sharci darrada ah waxba ka ma aan faa’iidin quus mooyaane,” ayaa uu yidhi Daniel.